Akụkọ Mika Heath na Martech Zone |
Edemede site na Micah Heath
Micah Heath bụ onye isi nyocha na mmepe ngwaahịa na Ọnọdụ ezi uche dị na ya, ụlọ ọrụ Inc. 500 hiwere isi na Oregon nwere ụlọ ọrụ na mba niile. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye njikwa PPC zuru oke, SEO, na ebe nrụọrụ weebụ imewe ngwọta maka azụmahịa ndị ukwu na ndị nta, ma bụrụkwa nke atọ kachasị mma iji rụọ ọrụ na America site na Inc. Magazine.
Nzọụkwụ ise ị nwere ike ime taa iji kwalite ire ahịa Amazon gị
Mọnde, Febụwarị 14, 2022 Mọnde, Febụwarị 14, 2022 Micah Heath
Oge ịzụ ahịa na nso nso a bụ n'ezie ihe atụ. N'oge ọrịa na-efe efe mere ihe akụkọ, ndị na-azụ ahịa gbahapụrụ ụlọ ahịa brik na ngwa agha n'ìgwè, ebe okporo ụzọ Black Friday na-ada ihe karịrị 50% kwa afọ. N'ụzọ dị iche, ịre ahịa n'ịntanetị rịrị elu, ọkachasị maka Amazon. N'afọ 2020, nnukwu ụlọ ọrụ ịntanetị ahụ kọrọ na ndị na-ere ahịa nọọrọ onwe ha n'elu ikpo okwu ebugharị $ 4.8 nde ngwa ahịa na Black Friday na Cyber ​​​​Monday - gbagoro 60% karịa afọ gara aga. Ọbụna ka ndụ na-alaghachi na nkịtị na United